Who were Bengali, so called Rohingya?: ဗိုလ်ကြီး ကိုကိုပိုင်ရဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားများအပေါ် ကိုယ်ပိုင်အမြင်
ကျေးဇူးပြု၍ နားဆင်ပါ ... ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ နေထိုင်လာတဲ့ ကုလားတွေကပါ ခုဆို အထင်တွေ အမြင်တွေ စောင်းနေတဲ့ အနေအထားတွေရှိလာကြပြီ ... ဒီတော့ ဒီအရေးဟာ ကျွန်တော်တို့ သမ္မတလက်ထပ်မှာတော့ ဖြေရှင်းရ အခက်ဆုံးပြဿနာအနေနဲ့ စတင်နေခဲ့ပါပြီ ...
( သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR အကြီးအကဲ Antonio Guterres နှင့် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးချိန်တွင် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘဲ ခိုးဝင်လာသော ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ခံဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ အလေးအနက် စဉ်းစားနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပြောကြားချက်ကို ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးက ပယ်ချခဲ့ပြီးထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ပြဿနာ အတွက် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုပေးရန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ )
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ UNHCR လက်ခံလာအောင် ၊ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို သူတို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အမျိုးတွေဆီကိုသာ ပို့ဖို့လိုကြောင်းကို အဝေးရောက်ရော အနီးရှိတွေကပါ ၀ိုင်းဝန်းနိူးဆော်ပါ .. ဒီပြဿနာဟာ အခန့်မသင့်ရင် စစ်မက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အနေအထားနဲ့တောင် ရင်ဆိုင်လိုက်ရမှာ။ ကျွန်တော်တို့ စစ်ဖြစ်မယ်ဆို စစ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး သယံဇာတကြွယ်ဝတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို မှောင်ခိုတွေနဲ့ ၀င်လာမယ့်သူတွေ ရှိကြမှာပဲ။ ဒီတော့ ဒါကိုနိုင်ငံရေးအရပဲ ဖြေရှင်းကြပါ။ စစ်ရေးအရမဖြေရှင်းကြပါနဲ့။ လူထုအုံကြွမှုဖြစ်တာကနေ စစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို FB နေ့တိုင်းဝင်၍ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပါ။ သင့်တော်မှန်ကန်မည်ထင်သည့် နည်းလမ်းများကို သမ္မတထံ အကြံပေးစာများအား တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဖြစ်စေ ၊စာဖြင့်ဖြစ်စေ ၀ိုင်းဝန်းပေးပို့ကြပါ။ မိမိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အားလည်း အားပေးနှစ်သိမ့် ထောက်ခံကြပါ။ အကောင်းဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်မနေ့က ရေးတင်တဲ့ “ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး” ကို အစဉ်နှလုံးသွင်းပြီး ဖြစ်နေတဲ့ ယခုအရေးကို မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်ကြပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော် အစိုးရ၀န်ထမ်းပါ ... တပ်မတော်သားတစ်ယောက်ပါ ၊ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးချစ်၍ အမျိုးသားရေးကို လေ့လာရန်သာ နိူးဆော်တိုက်တွန်း၍ ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပညာသင်စရာရှိ မသင်ပဲ စောင့်ရူးထနေပြန်ပြီလို့မထင်နဲ့ .. ကျွန်တော်လုပ်တာ အမှားပါလျှင် ... ပေးသည့်အပြစ်ဒဏ်ခံရဲ ၍ ကျွန်တော့်စကား ကျွန်တော် ဤနေရာမှ တာဝန်ခံရဲပါသည်။
ကြည်း ၊ ၄၀၅၆၇ ဗိုလ်ကြီး ကိုကိုပိုင်
You are Bangali Buddhist Awakyunetha.
I agree your pages,
peace for world said...
is this Myanmar's people???
how savage you are, I doubt that you are human. STOP Genocide, imagine if you become Muslim Rohingyas, are you willing to accept suchamassacre??
Yes, We're Myanmar.So we protect our country.
Stop Bangali Rohingya kalar lie the world as they are ethnic of Burma